यी हुन् निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोगहरु « News24 : Premium News Channel
यी हुन् निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोगहरु
Posted By News24Nepal.TV || Date: 21 October, 2017
बिबिसी- विख्यात अमेरिकी फिल्म शृंखला ‘स्टार वार्स’की अभिनेत्री क्यारी फिसरको निधनको मुख्य कारण ‘स्लिप एप्निया’ रहेको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरेका छन्। निदाएका बेला सास रोकिनुलाई डाक्टरी भाषामा ‘स्लिप एप्निया’ भनिन्छ । निदाएका बेला कैयौंपल्ट केही सेकेन्डका लागि सास फेर्न रोकिन्छ। ६० बर्सकी फिसरको गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा निधन भएको थियो । जनवरीमा जारी मृत्युको प्रमाणपत्रमा उनको निधन हृदयघातबाट भएको उल्लेख गरिएको भए पनि चिकित्सकहरूले निधनको सही कारण पत्ता लगाउन सकेका थिएनन्।
अहिले आएर लस एन्जल्सका एक जना चिकित्सकले स्लिप एप्नियासँगै मुटुसम्बन्धी रोग र लागुऔषध प्रयोगले फिसरको निधन भएको बताएका छन । निदाएका बेला घाँटीका मांसपेशी र सफ्ट टिस्युज खुम्चिएर आरामको मुद्रामा आउँछन् र सास रोकिन्छ । यसरी १० सेकेन्ड वा त्यसभन्दा बढी समय सास रोकिए त्यसलाई स्लिप एप्निया भनिन्छ । अधिकांश मानिस सुतेका बेला केही सेकेन्ड सास रोकिनु सामान्य हो। यसैकारण सुतेका बेला बारम्बार निद्राबाट ब्युँझिनु अधिकांशको समस्या हो । यसबाट अन्य समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छन् । तर धेरै समय जस्तो कि एक मिनेट नै सास रोकियो भने यसले ज्यानै पनि जान सक्छ।
कुनै कुनै यस्तो केसमा यो समस्या मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ । जतिबेला मस्तिष्कले सुतेका बेला सास फेर्दा प्रयोग हुने मांसपेशीलाई सञ्चालित हुन कुनै संकेत वा आदेश दिँदैन। स्लिप एप्नियाका कारणले मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमी हुन्छ र मस्तिष्कले हामीलाई गहिरो निद्राबाट ब्युँझाइदिन्छ । कतिपल्ट त हाम्रो निद्रा पूरै खुल्छ भने कतिपल्ट अर्धनिद्रामा हुन्छौं, तर यी सबै हामीले ख्यालै गर्दैनौं।
यो पनि पढ्नुहोस् – यि हुन आफ्नै मुत्र सेवनका अचुक १० फाइदा
जीवन शैली परिवर्तन र केही उपचार गरी स्लिप एप्नियाबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ । तर यसको बेबास्ता गरी हेलचक्र्याँइ गरेमा भने यो निकै ठूलो समस्या बन्न सक्छ । स्लिप एप्नियाको बेबास्ता गरे यसले दैनिक कामकाज र जीवन नै नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्छ । साथै बेलैमा उपचार नगरे यसले उच्च रक्तचाप, हृदयघात, मुटुको चाल अनियन्त्रित र टाइप टु मधुमेह हुने जोखिम बढ्छ।
एउटा अनुसन्धानले स्लिप एप्निया भएको मानिसले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना १२ प्रतिशत बढी हुने देखाएको छ । स्लिप एप्नियाका रोगीले सवारी चलाउनु अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। ‘पिपुल’ म्यागाजिनलाई फिसरकी छोरी लुअर्डले भनिन्, ‘मेरी आमा जीवनभर लागुऔषधको कुलत र मानसिक बिमारीसँग लडीरहनु भयो र अन्त्यमा त्यसैले उहाँको ज्यान गयो।’
कलिलैमा विवाह गर्ने प्रचलनले मुगुमा किशोरी आमाको संख्या बढ्दो
जाडोको समयमा कालो चिया ? यस्ता छन् फाइदा !
प्रदेश नं ३ सरकारद्वारा नौ जिल्लाका अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति
खोरेत रोग फैलियो, विज्ञ भन्छन्- सरुवा रोग हो, खासै उपचार हुँदैन
स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु छ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने
भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको अवैध सामान बरामद्